ၾကားသိသမၽွ Archives - SonSon LinLin
လြမ္းဆြတ္တမ္းတဖြယ္ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ကို ေရးသားလိုက္တဲ့ မင္းေမာ္ကြန္း ပရိသတ္ႀကီးေရ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ထိပ္တန္းမင္းသားေတြထဲမွာ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ မင္းေမာ္ကြန္း ဟာလက္ရွိမွာ ပုဒ္မ ၅၀၅ က နဲ႔ တရားစြဲဆိုခံထားရတာေၾကာင့္ ေဘးကင္းရာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကို မိသားစုနဲ႔အတူ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းေမာ္ကြန္း ရဲ႕ လူမႈ႕စာမ်က္ႏွာအေကာင့္ဟာ တစ္လနီးပါး အပိတ္ခံထားရတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြကို သိေစခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို ဒါ႐ိုက္တာ သည္ေခတ္ေနမွ တစ္ဆင့္တင္ေပးေနတာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မင္းေမာ္ကြန္း ဟာလြမ္းဆြတ္တမ္းတဖြယ္ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ကို […]
ေစ်းသြားရင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးကြာေနေသာ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေလးနဲ႔ ျပန္ဆုံေတြ႕ခဲ့ရာ…
လူသားတိုင်းတွင် အခင်ရဆုံးနဲ့ အချစ်ရဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လောက်တော့ ရှိဖူးမည်ဟု ထင်မိပြီး ဝေးကွာနေသည့်အခါမှာလည်း သတိတရရှိကာ ပြန်ဆုံတွေ့ရန် ကြိုးစားမိကြမည်ဟု ထင်မိသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ အသက်၄၀ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးသည် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းက အိမ်နီးနားချင်းနဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြရာ မိသားစုအခက်အခဲတွေကြောင့် တစ်နယ်ခြားစီ ဝေးကွာသွားခဲ့ကြရသည်။ သူတို့နှစ်ဦးမှာ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ကြပေမယ့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မမေ့ပဲ သတိတရတွေရှိကာ တစ်နေ့ပြန်ဆုံတွေ့ရန် မျှော်လင့်ချက်လေးတွေ ထားရှိပြီး နောက်ဆုံး အသက်၄၀ကျော်ပြီး အိမ်ထောင်တွေကျ သားသမီးတွေကိုယ်စီရချိန်မှ ပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြရသည်။ အမျိုးသမီးသည် အပြင်ထွက်ပြီး […]
ကိုစိန်သောင်းနဲ့ သူတောင်းစားဘောစိ (သူနဲ့ကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲဗျာ)
ကိုစိန်သောင်းနဲ့ သူတောင်းစားဘောစိ (သူနဲ့ကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲဗျာ) “ဟာ .. မရှိဘူး .. သွားသွား ” ဆိုလည်း မရဘူး .. သူတောင်းစားက ပေကပ်ကပ်နဲ့ ကျုပ်ဘေးနား ထိုင်နေသေးတယ် .. ” တကယ်မရှိလို့ပါကွာ .. ဒီမှာတွေ့လား ၃ရာပဲ ပါတယ် ” တကယ်လည်း ကျုပ်မှာမရှိဘူး .. အိမ်က ထွက်လာကတည်းက မြန်မာငွေ၃ရာပဲ ပါလာတာလေ ဒါတောင် မတတ်သာလို့ ဘုရားစင်ကနေ […]
ထိုင်းက လာတယ်ဆိုတဲ့ ဟော့ဒေါ့ချောင်း ၃ ချောင်း စားမိလို့ ဆေးရုံရောက်သွားရတဲ့ အဖြစ်
ထိုင်းက လာတယ်ဆိုတဲ့ ဟော့ဒေါ့ချောင်း (၃) ချောင်း စားမိလို့ ဆေးရုံရောက်သွားရတဲ့ အဖြစ် အရေးကြီးလို့ ကလေးရှိတဲ့ မေမေတွေမကျော်သွားပါနဲ့နော်.. သားသားက ကိုရီးယားအကင် အရမ်းကြိုက်တဲ့ သူပါ.. မေမေကလည်း ကျွေးနေကျမို့ သူပူဆာလို့ ကျွေးမိပါတယ်.. ခုပြောချင်တာက ခါတိုင်းစားရင် ဘာမှ မဖြစ်တတ်ပဲ ဟော့ဒေါ့ချောင်း ကြက်နီ တံဆိပ်ကို အိမ်မှာ ဝယ်ပြီး ကြော်ကျွေးမိတယ်.. သားသားက ၃ ချောင်း စားမိတယ်.. စားပြီး တစ်နာရီကျော် […]
မိန္းကေလးေတြဟာ ခ်စ္မိၿပီဆိုရင္ သိပ္ကိုသတၱိရွိၾကပါတယ္…
မိန္းကေလးေတြဟာ ခ်စ္မိၿပီဆိုရင္ သိပ္ကိုသတၱိရွိၾကပါတယ္… ဒီပုံေလးက လြန္ခဲ့တဲ့ တႏွစ္က fb ေပၚမွာ ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ပုံေလး၊ သေဘာက်လို႔ သိမ္းထားရင္း အမွတ္တမဲ့ ျပန္ေတြ႕တာ ေကာင္ေလး လက္ကို ဆြဲၿပီး ခုန္ကူးေနတဲ့ မိန္းမငယ္ေလးရဲ႕ မ်က္နာမွာ ယုံၾကည္ျခင္းေတြ,ခ်စ္ျခင္းေတြ, ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းေတြ ရွိတယ္ …။ ေဘးက ျမင္တဲ့သူေတြက ျပဳတ္က်မလား စိုးရိမ္ၾကတယ္။ ငါသာဆို မကူးရဲဘူး ေျပာခ်င္ ေျပာၾကမယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဒီမိန္းကေလးကေတာ့ သူ႔ခ်စ္သူကို […]
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမအောင်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က တောရွာတစ်ရွာမှာ ဆရာမသွားလုပ်သောအခါ… တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမအောင်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က တောရွာတစ်ရွာမှာ ဆရာမသွားလုပ်ခဲ့တယ်။ကျောင်းသားတွေ နားလည်အောင် စာကို ရှင်းမပြတတ်တော့အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ ပါးပြင်ပေါ်က ကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေကို အေမက ပွတ်သပ်ပေးရင်း သမီးနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုတော့ရှိမှာပါ လို့ သူ့ကို နှစ်သိမ့်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မြို့ပေါ်တက်ပြီး အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့တယ်။ မကြာဘူး.. အင်္ကျီစညှပ်ရာမှာ နှေးကွေးလွန်းတယ် ဆိုပြီး အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရပြန်တယ်။မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့ အလုပ်မှာ စစချင်း နှေးကွေးတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ သမီးက ဘာမှ […]
ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ကျွန်တော်ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက်မိတယ်
ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက် မိတယ် မိန်းမတွေဆိုတာညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက် မိတယ်အသင့် အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ နူးညံ့ လှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော် သေချာ ကြည့်နေရင်းကနေ အတွေး တစ်ချို့ ဝင်လာပြီး ကျွန်တော့ဟာ ကျွန်တော် တွေးနေမိတယ်မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့် ? ကျွန်တော်နဲ့ မင်္ဂလာ မဆောင်ခင်က […]
သူတောင်းစားတစ်ဦးလိုဟန်ဆောင်ပြီးသားသုံးယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ဖခင်အိုတစ်ဦးရဲ့ ရလဒ်
February 7, 2022 sonsonlinlin 0
Liu ဟာ သူ့မှာသား ၃ ယောက်ရှိပြီး သူရဲ့သားများကိုထောက်ပံ့ရန် မြို့သို့သွားပြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Liu ဟာ မြို့မှာပင်ပန်းတဲ့အလုပ်များစွာကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း သားသုံးယောက်ရဲလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ထိုက်တန်တယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အပြင်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အသက် ၇၀ နီးပါးရှိပြီးဖြစ်တဲ့ Liu ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ယခင်လို့ ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်များကိုမလုပ်နိုင်တော့တာကြောင့် Liu ဟာ သူရဲ့ဇာတိမြို့သို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူ့သားများနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူမနေခဲ့ရသလို သားများရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုသေချာမသိနေတာကြောင့် Liu ဟာ သူ့အပေါ် သားသုံးယောက်ရဲ့သဘောထားကိုစုံစမ်းရန် သူ့ကိုယ်သူ သူတောင်းစားတစ်ဦးလိုဟန်ဆောင်ကာ ရွာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ […]
စိတ်မော၊ လူမောနဲ့ မင်္ဂလာဦးညက ဖြစ်ရပ်အကြောင်းစုံ
သိသိမသိသိ နှုတ်ဆက်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီး ပြီးသွားတယ်။ စိတ်မော၊ လူမောနဲ့ …။ ငယ်သူငယ်ချင်း ယောကျာ်းတွေက ‘ခဲဖိုး’ တောင်းတယ်၊ငယ်သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတွေကတော့ ‘ရွှေကြိုး’ တားကြ တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း မငြင်းဘူး။ ပေးစရာရှိတာ ပေးလိုက် တယ်။ ဒါမှ မင်္ဂလာဦးရဲ့ညဦးမှာ လူရှင်းတော့မှာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ညရောက်လာတယ်။ဒီနေ့ညက အရမ်း တန်ဖိုး ရှိတယ်။သူ ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုရှိနေမယ် တော့ ကျွန်တော် မသိဘူး။ကျွန်တော် ရင်တွေ အရမ်း […]
ဦးဖိုးအေးတို့ မိသားစု သင်္ချိုင်းထဲ မှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ
ဦးဖိုးအေးတို့ မိသားစု သင်္ချိုင်းထဲ မှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ *သင်္ချိုင်း ဆိုသည်မှာ* လူတစ်ယောက်က မေးတယ်… “ကိုဖိုးအေး ခင်ဗျား သင်္ချိုင်းထဲက မျှစ်တွေ ယူစားနေတာ မရွှံဘူးလား…? ဖြေ။”ဘာရွှံမလဲကွ လူသေကောင်က ထွက်တဲ့မျှစ်မှ မဟုတ်တာ မြေကြီးထဲက ထွက်တဲ့မျှစ်ပဲ ဘာရွှံစရာရှိ လဲ။သင်္ချိုင်းဆို တာလဲ မြေကြီးပါပဲကွာ လူ တွေသမုတ်ထားလို့သာ သင်္ချိုင်းဖြစ်နေတာပါ ငါဆို ဒီသင်္ချိုင်းက ထွက်တဲ့မျှစ်တွေ စားလာတာ […]